Jimco, Jan 22, 2021-Dowaladda Vietnam oo sheegtay in ay xoojineyso taageerrada Soomaaliya – LaacibOnline
Jimco, Janaayo, 22, 2021 (HOL) – Dowaladda Vietnam ayaa sheegtay in ay taageerayso geedi socodka dimuqraadiyada Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka soo socda in ay ku dhacaan si nabad ah oo heshiis ay ku yihiin dhammaan dhinacyada Soomaaliya.
Nguyen Phuong Tra, Kuxigeenka Wakiilka Joogtada ee Vietnam ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in xukuumadooda ay qorsheysay in dadaalka loogu jiro Soomaaliya oo nabad ah ay doorkooda ka qaataan.
Wadahadalkii aan rasmiga aheyn ee dhex maray Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay (UNSC) iyo Wasiirka Arimaha Dibada ee Soomaaliya Maxamed C / risaaq bishii Janaayo 20, Nguyen Phuong Tra waxaa ay muujisay rajadeeda in Dowlada Federaalka Soomaaliya, dowladaha xubnaha ka ah iyo xisbiyada siyaasada ay dadaal dheeri ah ku bixin doonaan sidii loo gaari lahaa is afgarad siyaasadeed oo gaar ah, taariikhda la qabanayo doorashooyinka iyo sidoo kale xal u raadinta caqabadaha jira.
Waxey cambaareysay Qaraxii ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoos iyo sidoo kale weerarro kale oo lala beegsaday dadka rayidka ah, ciidamada amniga iyo kuwa millatariga, iyo xarumaha UN-ka iyo Afrika Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM .
Waxey sheegtay in mar walba ay u taaggan yihiin taageerada dadaalka dadka Soomaaliyeed ee ku aaddan nabadda, xasilloonida iyo horumarka, iyadoo dhanka kale ka codsatay bulshada caalamka in ay ka caawiso Soomaaliya sidii ay ku gaari lahayd himilooyinkeeda iyada oo ku saleysan ixtiraamka sharciga caalamiga iyo iyo madaxbannaanida dalka.
← Express Entry: Canada invites 4,626 candidates in 2nd draw this week
Review Of The Day 22nd January 2021 →
Axad, Sept 13, 2020-Shirka dowladda dhexe, dowlad Goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo maanta Muqdisho ka furmaya
Jimco, Aug 14, 2020-Madax dhaqameed shil gaadhi ku waxyeeloobey iyo xaalada degaano dagaal ka dhacay oo haatan degan
Isniin, Sept 21, 2020-Somaliland oo iska fogeysay inay qeyb ka tahay hannaanka doorashada Soomaaliya